कहिलेकाहीँ किताबको बोक्रो सुन्दर लाग्छ, विज्ञापन झन् दमदार हुन्छ तर शब्दहरुले अलिनो भाषा बोलिरहेका भेटिन्छन् ।
माघ २५, २०७६ प्रकाश अधिकारी
कुन पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ ?
यही पुस्तक लेख्ने भन्दापनि कविताको काम गर्दैछु । निकट समयमा कविताकै किताब प्रकाशित हुन्छ होला ।
तपाईंको किताबमा के छ ? किन पढ्ने ?
मेरो किताबमा कविताहरु छन् । ती आम मान्छेका सन्दर्भमा अस्तित्व इमान र प्रतिकार बोक्छन् कविताको भाषामा । त्यसैले कविता पढ्नलाई मेरो किताब पनि पढ्नु पर्छ ।
पाठकहरु कस्तो साहित्य खोजिरहेका छन् ?
पाठकको कुरा स–साना अनुच्छेदमा अट्दैन । यिनीहरु वृहत् परिवेशका, अनेकौ स्वाद र आयामका हुन्छन् । सामान्यतया अहिले पाठकहरु परिष्कृत छन्, उनीलाई छनौटको सुविधा पनि छ । विश्वबजारमा पहुँच पनि छ । अतः नेपाली साहित्यमा विश्वस्तरीय स्वाद खोजिरहेका पनि छन् ।
साहित्यमा भित्रिएको विकृतिबारे तपाईंको धारणा ?
साहित्यमा भित्रिएको विकृति भनेर कुन सन्दर्भलाई जोड्न खोज्नु भएको हो ? त्यस विषयभित्र पसेर मात्र केही भन्न सकिन्छ । समग्र साहित्यको आयाममा केही न केही त विकृति भइहाल्छ । त्यो कृतिगत, कुनै विधागत या साहित्यिक संस्कार वा स्तरमा आएको विकृति पनि हुनसक्छ । एउटा कुरा, साहित्य क्षणिक प्रभावले रङ्गिन थालेको चाहिँ अनुभूत हुन्छ चाहे लेखनमा होस्, चाहे पठनमा होस् ।
अहिलेको युवापुस्ताको लेखनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
म युुवापुस्ताको लेखनलाई बडो आग्रहपूर्वक हेरिरहेकी छु । उनीहरुले यो समयअघि लेखिएका विषय, कृति र साहित्यभित्र छिरुन् । त्यहाँबाट आफूलाई परिपक्व बनाएर उत्रिउन् र लेख्न बसुन् भनेर एउटी आमाले सन्तानको परिपक्वता हेर्न चाहेको आकांक्षाले भरपुरु भएर हेरिरहेकी छु ।
नपढी नहुने पुस्तक ?
नेपाली भाषामा माधवी ।
तपाईँलाई कस्ता पुस्तक लेखियोस् जस्तो लाग्छ ?
मलाई अहिलेसम्म नलेखिएका क्लिसेविहीन कृतिहरु लेखिउन् जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ किताबको बोक्रो सुन्दर लाग्छ, विज्ञापन झन् दमदार हुन्छ तर शब्दहरुले अलिनो भाषा बोलिरहेका भेटिन्छन् । यस्ता किताबहरुले झुक्किएको धेरैपटक भो । मलाई पछिल्लो समय युगीन आयु लिएर जन्मिएको कुनै किताब लेखियोस् जस्तो लाग्छ जसले हरेक वयका मानिसहरुलाई मुग्ध पार्न सकोस् । समयको सीमालाई जित्न सकोस् ।
शनिवार, माघ २५, २०७६, ०७:०२:००
हामी मान्छे भएर बाँच्न चाहन्छौँ - पवित्रा सानु
शिव पलाँसकाे कविता: प्रतिक्षा
नाचौँ बरिलै (बालकविता) - रमेशचन्द्र घिमिरे
कोरोनाबाट मृत्यु भएका पतिको सम्झनामा लेखिएको मार्मिक शोक काव्य पढ्नुहोस्
रोसन तिमिल्सिनाका ३ कविता
जेठ ७, २०७७ प्रकाश अधिकारी
माधव घिमिरे 'अटल'काे कविता : हुरीको गीत
बैशाख ३१, २०७७ प्रकाश अधिकारी